အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုခြင်းယော်ဒန်မြစ်၏မြို့တော် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ယော်ဒန်မြစ်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ဂျော်ဒန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရီးသွား most ည့်အများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ Hashemite Kingdom သည်ဂျော်ဒန်မြစ်ကမ်းနားတွင်ရှိပြီးအီရတ်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ အစ္စရေး၊ ပါလက်စတိုင်း၊ ပင်လယ်နီနှင့်ပင်လယ်သေတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအရနေရာဒေသများစွာတွင်တည်ရှိသည်။
အာမန်သည်ဂျော်ဒန်၏မြို့တော်ဖြစ်သည် ဘုရင်မရာနီယာ၏ကြယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လူသိများသောဤနိုင်ငံသို့တံခါးပေါက်သည်ဟိုလာမဂ္ဂဇင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဤမြို့သည်လူ ဦး ရေအများဆုံးသောမြို့ဖြစ်ပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသည်အတော်အတန်လစ်ဘရယ်ရှိပြီးအနောက်တိုင်းသားဖြစ်သည်။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားခရီးသွား comfortable ည့်သည်အဆင်ပြေသည့်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့အာရပ်မြို့ကြီးများသို့သွားရောက်လည်ပတ်မှုအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာသည် သငျသညျအမန်း၌တွေ့မြင်လုပ်နိုင်သမျှ.
အမ်မန်သည်ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင်တည်ရှိပြီးမူလကတောင်ကုန်းခုနစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ခံစားကြည့်ပါ မိုးနည်းရေရှားရာသီဥတု ဒါကြောင့်ပင်နွေ ဦး ရာသီ၌ပင်အပူချိန် 30 ºCနှင့်နီးသည်။ နွေရာသီသည်များသောအားဖြင့်ပူပြင်းပြီးဆောင်းရာသီသည်နိုဝင်ဘာလကုန်ဆုံးသောအခါစတင်သည်။ များသောအားဖြင့်အအေးဖြစ်ပြီးအေးသောလှိုင်းထဲတွင်နှင်းကျနိုင်သည်။
ဂျော်ဒန်လူ ဦး ရေ၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဤတွင်နေထိုင်ကြသည် ၎င်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးများပြားသောလူ ဦး ရေဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအာရပ်နှင့်ပါလက်စတိုင်းသားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့လာမယ့်စောင့်ရှောက်လော့။ လူ ဦး ရေအများစုမှာ Sini မွတ်စ်လင်မ်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဗလီအများအပြားရှိသည်။ လူနည်းစုဖြစ်သော်လည်းခရစ်ယာန်များလည်းရှိသည်။ အာမန် နိမ့်ကျတဲ့အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုပါခေတ်သစ်တာဝါတိုင်အချို့ဆောက်လုပ်ထားပြီးဖန်ခွက်များစွာပါရှိသောအလယ်ဗဟို မှလွဲ၍ ။ လူနေအဆောက်အအုံများသည်လေးထပ်ထက်မပိုသောကြောင့်လသာဆောင်များနှင့်မုတ်များရှိသည်။
အနောက်တိုင်းကုန်တိုက်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဘားများဝေးလံသောနေရာတိုင်းတွင်ရှိသည် ရှေးရိုးစွဲ site တစ်ခုဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်.
အမ်မန်သည်ရာစုနှစ်များစွာသမိုင်းရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လွတ်လပ်ရေးမရမီအထိသမိုင်းမတိုင်မီကဂရိ၊ ရောမ၊ အော့တိုမန်၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကောင်းမွန်ပြီးမကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည် သင်က၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှစ်ခုကိုတစ်ခုခုကိုရောက်ရှိတစ်ချိန်ကသင်ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်သည်။ မြို့၏အဓိကနေရာတွင်အဝိုင်းရှစ်ခုရှိပြီးအသွားအလာမှာဖရိုဖရဲဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဝက်ဝံများကိုရယူရန်မှာအတော်လေးလွယ်ကူသည်။
Amman ရှိခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်ကဘာတွေလဲ။ သင်ဘယ်တော့မှမမေ့သင့်သောအရေးကြီးဆုံးအရာများအကြောင်းပြောနိုင်သည် - Citadel၊ ရောမပွဲကြည့်စင်၊ တူရကီရေချိုးကန်၊ အမွှေးနံ့သာဆိုင်၊ တော်ဝင်မော်တော်ယာဉ်ပြတိုက်၊ ဂျော်ဒန်ပြတိုက်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်နှင့်ပြခန်း။ ဥပမာအားဖြင့် de Bellas Artes ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး ဦး တည်ရာကို Petra ဘယ်မှာနေ့ခရီးစဉ်အပြင်။
Amman ၏ Citadel ၎င်းသည်အမြင့် ၈၅၀ မီတာအကွာတွင်ရှိသော Jebel al-Qala'a မြို့၏အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဤတောင်ကုန်းကိုကြေးနီခေတ်ကတည်းကနေထိုင်ခဲ့သည်။ မြို့ရိုးကိုမတူညီသောသမိုင်းဆိုင်ရာကာလများ၌အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအရှည် ၁၇၀၀ မီတာရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုလွဲချော်မသွားစေရန်ဖြစ်သည် Ummayad နန်းတော် နှင့် ဗိမာန်တော် ဟာကြူလီ။ ဒီဗိသုကာကို Marcus Aurelius လက်ထက်၌တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေသောအရာက၎င်းသည်အလွန်အမင်းထူးဆန်းသောဘုရားကျောင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Umayyad နန်းတော်သည်တော် ၀ င်လူနေအိမ်အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏နေအိမ်ဖြစ်ပြီးအေဒီ ၇၄၉ တွင်ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့အမြဲတမ်းတည်ရှိသည်။ စပိန်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များကပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံသဏ္inာန်နှင့်အံ့သြဖွယ်မျက်နှာကျက်တွင်ရှိသောပရိသတ်ကြီးခန်းမမှာဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ The ရေလှောင်ကန် ၎င်း၏လှေကားအောက်ခြေနှင့်ရေအဆင့်ကိုတိုင်းတာသောကော်လံနှင့်အတူ ဘိုင်ဇင်တိုင်း basilica 15 ရာစုက၎င်း၏ mosaics နှင့်အတူ။ တစ်နာရီ JD XNUMX နှုန်းဖြင့် Citadel တစ်ခုလုံးသို့သွားရန်အသံလမ်းညွှန်များရှိသည်။
El ရောမပွဲကြည့်စင် အဲဒါကိုပြန်ထားပါတယ် ၎င်းသည်တောင်စောင်းတစ်ဝိုက်တွင်ရှိပြီးလူပေါင်းခြောက်ထောင်အတွက်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအေဒီ ၂ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရပြီးယခုအခါအမျိုးသားရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်၌တည်ရှိသည့်အသီနာ၏ရုပ်ထုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းကို ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်မူရင်းပစ္စည်းကိုမျှမသုံးခဲ့ပါ၊ နံနက်ခင်းအလင်းသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးနေဝင်ချိန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက်အနည်းငယ်အနားယူရန် တူရကီရေချိုးခြင်းသို့လည်ပတ်ပါ။ ဤတွင်အမျိုးသမီးများသည်တစ်ဖက်၌တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်တွင်အမျိုးသားများရေချိုးသည်။ အလွန်ပူပြင်းသောသို့မဟုတ်နွေးထွေးသော jacuzzis နှင့်အအေးခန်းများရှိပါသည်။ အတွေ့အကြုံကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါတို့တွေအများကြီးအနားယူခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံသည် မွှေးကြိုင်သောစတိုးဆိုင်သို့သွားပါ။ အမွှေးနံ့သာများ သင်နှင့်အတူအိမ်သို့ယူရန်ထူးခြားသောအမွှေးနံ့သာများကိုအနံ့ခံနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းအရသာရှိတဲ့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် ဂျော်ဒန်ကော်ဖီ, တူရကီသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအကြားရွေးချယ်ပါ, ထိုမြည်းစမ်း ကဲ, appetizers သို့မဟုတ် tapas (falafel, hummus, tabbouleh, fattoush, olives ... ) ။
El တော်ဝင်ပြတိုက် ကား ဂျော်ဒန်၏သမိုင်းကို 20 မှပစ္စုပ္ပန်အထိဖော်ပြသည်။ ထိုကားများမှာယခင်ဘုရင်များ၏ဘုရင်များဖြစ်သောဘုရင်အဗ္ဗဒူလာ ၁ မှစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်လင်ကွန်း Capri၊ ၁၉၃၆ Cord 1952 နှင့် ၁၉၅၅ Mercedes Benz 810SL တို့ရှိသည်။ ခရီးသွား ists ည့်သည်များ JD 1936 ကိုပေးဆောင်ပြီးပြတိုက်ကိုနံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၇ နာရီအထိအင်္ဂါနေ့ မှလွဲ၍ နေ့တိုင်းဖွင့်သည်။
မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့ ဂျော်ဒန်ပြတိုက် နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကိုကြွယ်ဝသောအမွေအနှစ်မှတဆင့်ဖော်ပြသည်။ Ras al-'Ayn ၌တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိဤနိုင်ငံတော်၏အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့များပိတ်ကြောင်းသတိပြုပါ The ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက် ၎င်းတွင်ပြတိုက်ခန်းမများ၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဓာတ်ခွဲခန်း၊ ပြတိုက်များစွာနှင့်ဤနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ အမွေအနှစ်များနှင့်သမိုင်းကြောင်းများကိုကိုင်တွယ်သည့်ယာယီပြပွဲများရှိသည်။
နှစ်ရက်၊ သုံးရက်အတွင်းမနက်ခင်း၊ နေ့လည်ခင်းနှင့်ညများ၌အမ်မန်ကိုအလွယ်တကူသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ ကခုန်ရန်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကလပ်များရှိသည်၊ ကဖေးများနှင့်ဘားများရှိသည် အနားယူရန်၊ လတ်ဆတ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသောက်ရန်နှင့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခဏတာခံစားရန်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါကမင်းရဲ့အခွင့်အရေးပါ Petra နှင့်တွေ့ဆုံပါ သငျသညျလစျြလြူရှုမည်မဟုတ်ပါ: ပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ် 10 နာရီခန့်ကြာမြင့်သည်နှင့်နံနက်7နာရီ Petra မှာအစောပိုင်းထွက်ခွာသည် ၂၂၂ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာ အာမန်းကနေ။ အကြောင်းကို $ 200 တွက်ချက်။
သင်ခရီးမသွားလျှင်သင်ဘတ်စ်ကားစီးနိုင်သည် လက်မှတ်ကို ၀ ီမီမူရှိ Petra itor ည့်သည်စင်တာတွင်၊ အပျက်အယွင်းများနှင့်အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော ၂ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ဝယ်ပါ။ သင်သည်အပျက်အယွင်းများကိုခြေကျင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မြင့်မားသောကျောက်နံရံများဖြစ်သော Siq ကို ဖြတ်၍ စီးနေသည့်မြင်းစီးသူရဲ - ကိုတွေ့နိုင်သည်။ တစ်ရက်လက်မှတ်သည် JD ၉၀ ကျသင့်ပြီး၊ တစ်ညအိပ်ရပ်နားလျှင် ၅၀ JD ကုန်ကျသည်။ site ပေါ်တွင်စားရန်နေရာများရှိပါသည်နှင့်ဝင်ပေါက်နှင့်အတူသူတို့သည်သင့်ရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုလုံးကိုနေရာချထားရန်မြေပုံပေးပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုဆောင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်သေချာတာပေါ့။
သင် ... ချင်ပါသလား Petra မှာညအိပ်တည်းခိုပါ နှင့်လာမည့်နေ့ကခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်? သင့်တွင်စခန်းတစ်ခု၊ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ခု Bedouin စခန်းရှိသည်။ တစ် ဦး လျှင်တစ်ညလျှင် ၂၂ ယူရိုကုတင်များ၊ ၁၉ ခန်းမှအခန်းများပါသော Rocky Mountain ဟိုတယ်၊ အာရပ်နံနက်စာနှင့်အတူယူရို ၄၄ ယူရိုသို့မဟုတ်အယ်လ်ရာရှစ်ဒ်ပါဝင်သည်။ နံနက်စာနှင့်လေအေးပေးစက် ၁၆ လုံးနှင့်အခန်း ၁၆ ခန်းပါဝင်သည်။ ယူရိုဥပမာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုရန်ယော်ဒန်မြစ်၏မြို့တော် Amman